December 24, 2020 – ASU Myanmar
ASU Global Program- Myanmar
History of ASU
Introduction of ASU Global Program- Myanmar​
ASU Global Program
Benefits for Freshman
Introduction of ETN Myanmar (About ASU Myanmar)
ASU Undergraduate Programs
ASU Global Program Benefits
Carr Scholarship Program
ASU Global Program Admissions
Admission procedure guide
LeaveaComment	/ Uncategorized / By web dev
နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်တော့မယ်ဆို ကြည့်ရမယ့်အချက်လေးတွေ ✅ Country (ဘယ်နိုင်ငံမှာတက်မလဲ) 🌎 အိမ်ကမိဘတွေ စိတ်ချမယ့် နိုင်ငံရွေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ အေးချမ်းတဲ့ နိုင်ငံလည်းဖြစ်ရပါမယ်။ အချို့တွေဆို ကိုယ့်ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရှိတဲ့ နိုင်ငံကိုရွေးချယ်တက်ကြပါတယ်။ Ranking (ဘယ်လိုကျောင်းတွေရွေးချယ်မလဲ) 🏫 ကျောင်းရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်း Ranking မြင့်တဲ့ကျောင်းကိုရွေးချယ်တဲ့သူများရှိသလို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့တက်ဖို့အတွက် Ranking အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ကျောင်အတော်တော်များများကတော့ Ranking အသင့်အတင့်ရှိကြပါတယ်။ Ranking မြင့်တဲ့ ကျောင်းတွေက Entry Requirements ပိုများသလိုTuition Fees လည်းပိုများလေ့ရှိပါတယ်။ Major and Specialize (ဘာမေဂျာတက်မလဲ) 📚 ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့မေဂျာကိုသာ ရွေးချယ်တက်ရောက်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဝါသနာမပါတဲ့ မေဂျာ တက်မိရင် စိတ်မဝင်စားလို့ စာမလိုက်နိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Job opportunities (အလုပ်အခွင့်အရေး) 🧳💺 အခုခေတ်မှာ ဝါသနာကို …
နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသွားတက်တော့မယ်ဆိုကြည့်ရမယ့်အချက်လေးတွေ Read More »
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Angelo State University နှင့် Scholarship
ကမ္ဘာမှာ မြန်မာအပါအဝင် ၄ နိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေအတွက်သာ အထူးအခွင့်အရေး ပေးထားတဲ့ Global Partnership Program ကနေ ကျောင်းလခ ၆၀% သက်သာမည့်In-State Tuition Fees ပြည်နယ်တွင်း ကျောင်းလခနဲ့ တက်ရောက်နိုင်မည့်အခွင့်အရေးတစ်ခုပါ🤗🤗 ✅ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေအတွက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အတွက် တနှစ်ကျောင်းလခက ဒေါ်လာ ၂၃၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။ ✅ အခု ASU-Myanmar ကနေတစ်ဆင့် Global Partnership Program ကို Join မယ်ဆိုရင်တော့ တနှစ်ကို ကျောင်းလခ ပျမ်းမျှ ဒေါ်လာ ၉၀၀၀ ​လောက်ပဲ ကုန်ကျတော့မှာ ဖြစ်ပြီး တနှစ်ကို ကျောင်းလခ ဒေါ်လာ ၁၄၀၀၀ လောက် သက်သာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ✅ တက္ကသိုလ်က …
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Angelo State University နှင့် Scholarship Read More »
SAT ဆိုတာ American4– year Universities တွေလက်ခံတဲ့ Standardized test တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ✅SAT ဆိုတာ national exam မဟုတ်ပါဘူး American EducationSystem က grade 9-12 အမှတ်တွေအားလုံးကို ကျောင်းလျှေက်တင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ✅ကျောင်းသားတွေရဲ့အမှတ်တွေကို SAT နဲ့ compare လုပ်ပါတယ်။ ✔️SAT မှာ အပိုင်း(၆) ပိုင်းရှိပါတယ်✔️ Test Structure➡️ SAT က Multiple Choise Test ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Evidence Based Reading နဲ့ Writing အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါပြီး တစ်ပိုင်းစီကို အမှတ် ၈၀၀စီပေးပါတယ်။စုစုပေါင်း အမှန်၁၆၀၀ဖြစ်ပါတယ်။ Evidence Based Reading And Writing …
SAT ဆိုတာဘာလဲ? Read More »
ASU-Myanmar ကနေနိုင်ငံခြားသွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသူများအတွက် လိုအပ်သောအကူအညီများ ပေးအပ်နေပါပြီ . . ~~~~ဒီတခေါက်မှာတော့ မြန်မာပြည်က ဆယ်တန်းအောင်ကျောင်းသားတွေကို လက်ခံပေးမည့် Angelo State University အကြောင်းနဲ့ ကျောင်းဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲဆိုတာပြောပြမယ်နော်~~~~ အန်ဂျလိုပြည်နယ်တက္ကသိုလ် ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တွေထဲက ထိပ်ဆုံး ၁၅% ထဲမှာပါတဲ့ အစိုးရတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၂၈ ခုနှစ်ကထဲက တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အဲဒီတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော် တက်ရောက်လျက်ရှိပြီး ကျောင်းသား၊ ဆရာ အချိုးက ၁၉:၁ ရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စား ရွေးချယ်စရာ ဘာသာရပ်ပေါင်းလည်း မျိုးစုံရှိပါတယ်။ Global Preparation Program💡 👉တက္ကသိုလ်ရဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခုက မြန်မာပြည်က ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် အထူးအစီအစဥ်တစ်ခု ရှိနေတာပါပဲ။ 👉အဲဒါကတော့ Global Preparation Program ဆိုတဲ့ …
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကုန်ကျစရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ကျောင်းတက်ဖို့အဆင်သင့်ပဲလား Read More »
Student/ computer ratio is 10:1: wireless Internet coverage throughout campus Residence Facilities: Six (6) modern residence halls and an apartment complex that house up to 2044 students.
Copyright © 2021 ASU Myanmar